Toddoba Isbeddel Oo Unai Emery Uu Ku Sameeyey Arsenal Si Uu Jabkii Wenger Uga Badbaado | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Toddoba Isbeddel Oo Unai Emery Uu Ku Sameeyey Arsenal Si Uu Jabkii Wenger Uga Badbaado
(10-10-2018) Tababare Unai Emery ayaa Arsenal kusoo celiyey kaalmaha sare ee loollanka ugu jira horyaalka xili ciyaareedkan, waxaanay laba dhibcood oo kaliya ka hoosaysaa Liverpool iyo Manchester City oo wada jir hoggaanka u haya, kulankii ugu dambeeyeyna waxay Gunners 5-1 ku xasuuqday Fulham oo ay weliba marti u ahayd.
Bandhig ciyaareedkan wanaagsan ee guulaha horseeday, ayaa waxa uu ka dhashay toddoba isbeddel oo uu Unai Emery ku sameeyey kooxdii uu ka tegay Wenger ee kaalinta lixaad kaga dhamaysatay horyaalka xili ciyaareedkii hore.
Calaamadaha ka muuqda Arsenal xili ciyaareedkan bilowga ah, waxay muujinayaan inay aad uga duwan tahay kooxdii uu Wenger ka tegay, jamaahiirtuna waxay ku qabi karayaan kalsooni inkasta oo bilowgii ugu horreeyey ay walaac aan sii soconin niyadda gashadeen.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa toddoba isbeddel oo uu Emery uu ku sameeyey kooxdii uu ka dhaxlay Wenger, kuwaas oo ka caawiyey inuu kasbado quluubta taageereyaasha iyo ciyaartooyadaba.
Tababarka garoonka Emirates: Isbeddelka ugu horreeya ee uu Unai Emery ka sameeyey Arsenal ayaa ah in wakhti badan ay ku tababartaan garoonka Emirates iyo goomada kale ee ay martida ku yihiin, si aanay dhibaato ugu dareemin marka ay ciyaaraha tooska ah ku leeyihiin.
Alex Iwobi ayaa laga soo xigtay in marka ay garoonkooda ku samaynayaan tababarka ay uga dhigan tahay sidii ay ciyaar caadi ah ku jiraan, taasina ka caawinayso inay si fiican ula qabsadaan garoonka iyo ciyaartooyada laftooduba si wacan iskula gartaan qaabka ay isku helayaan marka ciyaar ay iskaga hor yimaaddeen kooxaha kale.
Emery oo isku dayaya shaxo kala duwan: Tababare Emery ayaa xili ciyaareedkan waxa uu kooxdiisa ku ciyaarsiiyey saddex shaxood oo kala duwan, kuwaas oo uu marba meel awoodda saaray, sida weerarka oo uu kordhiyey amaba dhexda oo uu kordhiyey. Tallaabadi waxay aad uga duwan tahay qaab-ciyaareedkii Arsene Wenger oo muddo 22 sannadood ah shax isku mid ah ku ciyaarsiinayey Arsenal.
Aqoonta uu u leeyahay kooxaha uu la ciyaarayo: Emery waxa uu si fiican u daraaseeyaa kooxaha ay la ciyaarayaan ka hor inta aan la gaadhin wakhtiga ay garoonka iskugu soo gelayaan, taasina waxay ka caawisaa inuu si adag ugu sii diyaar garoobo amaba uu kula ciyaaro shax fudud oo aanu ciyaartoygiisa waaweyn halis gelinin.
Kulankii tartanka Europa League ee Qarabag, waxa uu si fiican u muujiyey inuu aqoon durugsan u leeyahay naadigaas ay la ciyaarayeen, waxaanu nasiyey ciyaartoygiisa muhiimka ah, halka tababarihii uu shaqada ka beddelay ee uu ciyaartooyadiisa ugu wanaagsan kusoo bilaabay ciyaar ay iskaga hor yimaaddeen naadiga yar ee Ostersunds, taas oo caddaysay in aanu sii daraasaynin kooxaha ka hor imanaya.
Kubbadaha dhaadheer: Shaki kuma jiro in taageereyaashu la dhacsan yihiin isbeddelka uu ku sameeyey qaab-ciyaareedkii caajiska ahaa ee Arsenal ee lasii saadaalin jiray sida uu noqonayo, waxaanu kusoo kordhiyey kubbado dhaadheer oo kooxaha ay ku adkaanayso inay sii qiyaasi karaan.
Horumarka ciyaartooyada ee ka dhashay cadaadiska: Qaab-ciyaareedka iyo adkaysiga ayey ciyaartooyadu ka sameeyeen horumar, waxaana faa’iidada ugu badan ka helay Iwobi iyo Hector Bellerin.
Siyaasadda uu ciyaartooyada kula dhaqmo tababare Emery ayaa ah mid qabow oo saaxiibtinimo ku jirto, hase yeeshee markay noqoto shaqada, waxa uu laacib walba amar ku siiyaa inuu waajibkiisa kasoo baxo, isagoo wakhtiyada qaarkoodna sidii dad saaxiibbo ah ula sheekaysta.
Da’yarka Emile Smith Rowe oo ka sheekeeyey hab-dhaqanka saaxiibtinimada leh ee Emery, ayaa waxa uu yidhi: “Waa qof si dhab ah ii caawiya aniga, sababtoo ah mar walba tababarka kaddib ayuu ila hadlaa. Koox ahaana, mar walba wuu nala hadlaa, shirar badan ayaanu yeelanaa marka aanu tababarka dhamaysano iyo xattaa ka hor ciyaaraha”
Qofna ma haysto boos joogto ah: Unai Emery awood buuxda ayuu ku leeyahay gudaha kooxda, mana jiro ciyaartoy uu u habrado amaba mid uu ku ixtiraamo maamulka oo loo sheego in aanu fadhiisinin amaba sidii Wenger aanu ku dhiirranin inuu kaydka geliyo.
Wakhtigii uu Arsene Wenger macallinka ahaa, may dhici jirin inuu fadhiisiyo Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil, hase yeeshee, Emery waxa uu kaydka u diray Ozil, Ramsey, Aubameyang iyo xattaa ciyaartoy kasta oo la tuhmi lahaa inuu hoggaamiye ka yahay
Baahidii Dhexda dambe ee difaaca xigta oo uu daboolay: Intii ay Arsenal weyday halyeygii reer Brazil ee Gilberto Silva, waxa iska bannaanayd khadka dhexe ee difaaca xigta, weeraryahannada ka soo horjeedaana waxay si fudud u gaadhi karayeen afarta difaaca ah iyo goolhayaha, hase yeeshee xili ciyaareedkan way isbeddeshay taasi.
Laacibka reer Uruguay ee Torreira oo xagaagii ay Arsenal soo iibsatay ayaa uu boos joogto ah ka siiyey difaaca hortooda, waxaanu noqday ilaaliye ay ku nasteen, fursad fiicanna waxa helay Granit Xhaka oo hore ugu ruqaansaday habaynta kubbadaha iyo caawinta weeraryahannada.
Toddobadan isbeddel ee uu hirgeliyey tababare Unai Emery ayaa neefta kusoo celiyey Arsenal, waxaanay taageereyaashu dareensan yihiin in macallinkoodu uu la tartami karayo Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Pep Guardiola, Sarri iyo Jose Mourinho.
Si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa qaybta hore ee xili ciyaareed kasta wanaagsanaan jirtay, hase yeeshee waxay siiban jirtay oo ay ka bixi jirtay kooxaha sare marka la gaadho bisha February, waxaana macallinkan la eegi doonaa sida uu u dhaafo bishaas masiibada ku ahayd tobankii sannadood ee ugu dambeeyey.